आत्महत्या रोकथाम दिवसमा राजधानीमा प्रभात फेरि - Health Today Nepal
आत्महत्या रोकथाम दिवसमा राजधानीमा प्रभात फेरि
September 10th, 2016 समाचार0comments
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा शनिबार राजधानीमा प्रभात फेरिको आयोजना गरिएको छ । द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल र साइकडेस्क फाउण्डेसनले आयोजना गरेको प्रभातफेरि भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएर विभिन्न स्थानको परिभ्रमण पछि सभामा परिणत भएको थियो ।
सहभागीले आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभागमा अध्ययनरत विद्यार्थी, प्रध्यापक, युवा सहकार्य नेपाल, रक्षा नेपाल, आईसिडिसी नेपाल लगायतका यस क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका पादधिकारी सहभागी थिए । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० लाई विश्व आत्महत्या रोक थाम दिवसका रुपमा मनाइने गरिन्छ । त्रिचन्द्र कलेज मनोविज्ञान विभागका उपप्राध्यापक डा. नरेन्द्रसिह ठगुन्नाले सबैभन्दा बढी आत्महत्या हुने विश्वका १० देशमध्ये नेपाल सातौ रहेकोले यसका बिषयमा जनचेचना जगाउन सकिएन भने यसले अझ भयाभव रुप लिने बताए । नेपालमा हरेक दिन करिव एक दर्जन व्यक्तिले कुनै न कुनै कारणले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको डा. ठगुन्नाले बताए ।
सार्कमा श्रीलंका पछि बढी आत्महत्या हुने देश नेपाल रहेको जानकारी गराउदै उनले यसको रोकथामका लागि सरकार र नागरिक समाज मिलेर लाग्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । बेरोजगारी, डिप्रेसन, लागुऔषध र मदिरा सेवन, प्रेममा असफल लगायतका कारणले नेपालमा आत्महत्या दर बढी रहेको विज्ञहरु बताउँछन ।
Previous article गगनले गरे स्वास्थ्यमा पद बहाली
Next article नखिपोटमा आनन्दवन अस्पतालको क्लिनिक